Carthamus Cas, Shirkadaha Casaanka ee Carthamus, Soosaarayaasha Casaanka Carthamus, Dhoofiyeyaasha Casaanka Cas
Ku saabsan Carthamus Cas
Carthamin waa qaybta ugu muhiimsan ee casaanka Carthamus.Waxaan arki karnaa casaan dhalaalaya oo dhalaalaya oo samaysmaya hadhuudh casaan-bunni ah ama budada kareemka leh indhaheenna qaawan. Waa biyo-degdeg ah. waa gabi ahaanba midab dabiici ah oo laga soosaaray taranka cusub ee Carthamus tinctorius l. by bayotechnoolajiyadda casriga ah.waxaa loo isticmaalay midabeynta casaanka dabiiciga ah, warshadaha cunnada, warshadaha dheeha, warshadaha qurxinta (tusaale ahaan lipsticks).
Badeecadan waxaa loo dhoofiyay wadamada EU, japan, usa, asia iwm heerka jir ahaaneed iyo heerka microbiological-ka ayaa sifiican ula kulmi kara heerarka wax dhoofinta. Si looga fogaado been abuurka, sheygan horeyba wuxuu u leeyahay ganacsi caadi ah no: q / kle35-2005.
[Baako] durbaanno kartoon ah, oo ay ku jiraan laba kiish oo bacaha cuntada lagu cuno ah oo laba jibbaaran, 25kgs halkii durbaan. ama durbaannada aluminium aluminium, oo ay ku jiraan bacaha bacaha cuntada lagu kariyo oo faaruq ah, 0.5-5kgs halkii xirmo.